Saraakiil Jubbaland ka tirsan oo booqday Goobweyn – STAR FM SOMALIA
Saraakiil Jubbaland ka tirsan oo booqday Goobweyn
Masuuliyiin Maamulka Jubbaland ka tirsan, ayaa waxay maanta booqasho ku taggeen Deegaanka Goobweyn, oo 11km u jirta Magaalada Kismaayo Ee Gobolka Jubbada Hoose.
Goobweyn waxaa habeenkii Axada lagu kufsaday saddex dumar ah, xilli sida la sheegay ay hoygoodu kala baxeen rag tiradoodu lagu sheegay shan illaa toban nin, oo hubka noocyadiisa kala duwan ku hubeysan.
Masuuliyiinta booqashada ku tagtey Goobweyn, ayaa waxaa horkacaayay Gudoomiyaha Kismaayo, Ibraahim Maxamed Yuusuf (Timajilac), waxaana booqashadaasi ku wehlinaayay Masuuliyiin uu ka mid yahay Taliyaha Ciidanka Daraawiishta Jubbaland, Korneyl Aadan Maxamed Ibraahim (Aadan Koojaar).
Masuuliyiintan, ayaa waxay la kulmeen shacabka ku dhaqan Deegaanka Goobweyn, oo ay ku jiraan dumarka dhibanayaasha, iyagoona kala hadlay sida ay iminka xaaladoodu tahay.
Mid ka mid ah dumarkaasi oo la hadashay Warbaahinta waxay sheegtay in raggii soo weeraray, ay rasaas ku dileen ninkii hoyga lahaa, ka dib markii uu damcay in kufsigaasi uu ka horjoogsado.
Ibraahim Timajilac iyo Aadan Koojaar, ayaa waxay si kulul kufsigaasi ugu eedeeyeen Ururka Al Shabaab, oo ay ku sifeeyeen kuwo aan wax naxariis ihi u ahayn shacbiga Somaliyeed.
Shabaabka hubeysan ee Somaliya ka dagaalamaya, ayaan wax jawaab ihi ka bixin eedeymahaasi, laakiin ma noqonaayo markii ugu horeysay oo Al Shabaab lagu eedeeyo kufsi.
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay Nicholas Kay oo beeniyey inay diyaarad kusoo dhacday Sh/Hoose
Taliyaha ciidamada Uganda Gen Katumba oo uga digey ciidamada Uganda ee Soomaaliya musuqmaasuq